Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Waa maxay sababta duulimaadka Finnair loogu sii marinayo Helsinki adduunka?
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Finland War Cusub • France Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Hong Kong • Wararka Jaban ee Japan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Wararka Singapore • Wararka Spain • War Deg Deg Ah Sweden • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Finnair waxay ku dhawaaqday duulimaadyo cusub oo Yurub, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika ah
Finnair waxay ku dhawaaqday jadwalka dheeraadka ah iyo duulimaadyada cusub ee Tokyo, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Stockholm, Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin, Frankfurt, London, Paris, St. Petersburg , Krakow, Gdansk, Madrid, Malaga iyo Barcelona.
Finnair wuxuu sii wadaa inuu u adeego meelihiisa muhiimka ah ee Aasiya, isagoo maalin walba u duulaya Tokyo, Seoul iyo Bangkok, wuxuuna siiyaa toddobaadyo badan Singapore iyo Hong Kong.
Finnair waxay xoojin doontaa adeegyadeeda Waqooyiga Ameerika waxayna u adeegi doontaa Chicago, oo ah marinka xagaaga, xilliga jiilaalka oo dhan.
Shabakadda Yurub ee Finnair ayaa si xawli ah u kordheysa jadwalka jiilaalka oo dhan, iyada oo adeegyo laba -laab ah maalin walba la siin doono magaalooyinka muhiimka ah ee Yurub sida Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin iyo Frankfurt.
Iyada oo saamiga dadka si buuxda loo tallaalay ay sii kordhayso oo bulshooyinkuna ay furmayaan, socdaalku wuxuu ka socdaa suuqyo dhowr ah. Finnair waxay la kulmeysaa baahida safarka ee korortay iyada oo ku dartay jadwalka iyo meelaha shabakadeeda Yurub, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika xilliga jiilaalka ee soo socda.
Finnair wuxuu sii wadaa inuu u adeego meelihiisa muhiimka ah ee Aasiya, isagoo maalin walba u duulaya Tokyo, Seoul iyo Bangkok, wuxuuna siiyaa toddobaadyo badan Singapore iyo Hong Kong. Adeegga Osaka ee Finnair wuxuu dib u bilaabmayaa Oktoobar, isagoo ballaarinaya joogitaanka Finnair dib ugu soo noqoshada suuqa Jabaan, iyadoo Nagoya ay ku biirtay faylalkaan waddada bishii Febraayo. Finnair ayaa sidoo kale bilaabi doonta adeeggeeda Dubai xiriirinta diyaarad jidh-ballaadhan leh.
Finnair waxay xoojin doontaa adeegyadeeda Waqooyiga Ameerika waxayna u adeegi doontaa Chicago, oo hore u ahayd marin xagaaga, xilliga jiilaalka oo dhan. Finnair ayaa sidoo kale maalin walba u adeegta New York oo ka timaadda Helsinki waxayna maamushaa saddex duulimaad toddobaadle ah oo u kala goosha Miami iyo Los Angeles siday u kala horreeyaan. Ka sokow u adeegista Waqooyiga Ameerika xarunteeda Helsinki, Finnair waxay soo bandhigi doontaa waddooyin toos ah Los Angeles iyo New York oo ka iman doonta Stockholm, Sweden. Finnair ayaa sidoo kale soo bandhigi doonta waddooyin toos ah oo ka yimaada Stockholm kuna sii jeeda Miami, Phuket iyo Bangkok, sida hore loogu dhawaaqay.
Shabakadda Yurub ee Finnair ayaa si xawli ah u kordheysa jadwalka jiilaalka oo dhan, iyada oo adeegyo laba -laab ah maalin walba la siin doono magaalooyinka muhiimka ah ee Yurub sida Amsterdam, Munich, Dusseldorf, Berlin iyo Frankfurt, iyo saddex jeer oo maalinle ah London iyo Paris. Finnair waxay kaloo kordhisaa isdabajoogyada St. Petersburg si ay u taageerto socodka gaadiidka ee Finnair ee Waqooyiga Ameerika.
Finnair sidoo kale waxay maalin walba siisaa jadwalyo badan caasimadaha Scandinavianka, Finnair waxay soo bandhigi doontaa Krakow iyo Gdansk xilliga jiilaalka. Finnair waxay kordhin doontaa jadwalka meelaha loo dalxiis tago ee caanka ah ee Spain, waxay u adeegi doontaa Malaga, Jasiiradaha Canary, Madrid iyo Barcelona oo leh jaadad toddobaadle ah oo badan. Sidoo kale Lapland -ka Finnishku wuxuu sii wadaa inuu soo jiito dadka socotada jiilaalka Finnair wuxuu siiyaa afar xiriir maalinle ah Rovaniemi, Ivalo iyo Kittilä, iyo laba adeeg oo maalinle ah Kuusamo, oo leh xiriir siman Helsinki.
"Waxaan ku faraxsanahay inaan awoodno inaan ballaarinno ballaarinta iyo qoto dheer ee shabakadeenna, taasoo awood u siineysa xiriir wanaagsan macaamiisha marka safarku sii socdo", ayuu yiri Ole Orvér, Madaxa Sarkaalka Ganacsiga, Finnair.